Wiilka uu dhalay Musikistaha caanka ah ee Craig Morgan oo meydkiisa laga helay balli ku yaala meel u dhaw…. | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Hollywood » Wiilka uu dhalay Musikistaha caanka ah ee Craig Morgan oo meydkiisa laga helay balli ku yaala meel u dhaw….
Wiilka uu dhalay Musikistaha caanka ah ee Craig Morgan oo meydkiisa laga helay balli ku yaala meel u dhaw….
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 12-07-16 1:52 PM Kooxda ku caanbaxday Sameynta Heesaha ayey maalin xun u noqotay kadib markii ay ka warheleen iney geeri ku timid wiilka uu dhalay Craig Morgan ee Jerry Greer kaasoo dooni uu saarnaa ay la qalibantay 10 kii bishan July.
51 Sano jirkan Craig Morgan ayaa maqaalo tacsi ka kala helay dhamaan bahweynta xiiseysa Music guud ahaan, iyaga oo ugu tacsiyeeyey geerida la yaabka leh ee ku timid inankiisa 19 jirka ah ee Jerry.
Jerry ayaa raacay duuni ku wajahneyd Biyo mareen ku yaala Los Angles 10 kii July balse duufaano ku dhuftay doonida ay saarnaayeen isaga iyo qaar kamid ah saaxiibadiisa, Booliska ayaa baadi goob u galay balse nasiib xuma waxa ay meydkiisa heleen kadib 24 saacadood.
Wiilkan uu dhalay Graig ayaa qorsheynayey inuu ku biiro kooxda ciyaarta Kubbada Cagta kana dhisan Jaamacadda Marshal xilli uu ogolaansho ka helay warqad codsi aheyd ee uu u diray Jaamacadaas isaga oo ka codsaday inuu kamid noqdo kooxda matasha Jaamacadda Marshal.